'साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार' संवाद; घामभन्दा पहिले | साहित्यपोस्ट
जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि एक “मेधावी प्रतिभा पुरस्कार” स्थापना गर्ने योजनामा छु - भवानी खतिवडा
साहित्यपोस्ट	 प्रकाशित १० जेष्ठ २०७९ १९:०१
यहाँ उत्कृष्ट एघारमा छनोट भएको नियात्रा ‘घामभन्दा पहिले‘की स्रष्टा भवानी खतिवडासँगको संवाद प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईँको पहिलो नियात्रा कृति “साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार” का लागि उत्कृष्ट पुस्तकको सूचीमा पर्न सफल भयो । कस्तो अनुभूति गरिरहनुभएको छ ?
‘घामभन्दा पहिले’ले यो तहको सफलता पाउला भन्ने कल्पनै नगरेकी मैले जब उत्कृष्ट पुस्तकको सूचीमा आफ्नो पुस्तकको पनि नाम पढ्न पाएँ, असाध्यै खुशी भएँ ।
“साहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार” का लागि ११ कृति छनोट भएका छन् । अर्थात् तपाईँका प्रतिस्पर्धीका रुपमा बलिया कृतिहरु छन् । तपाईँले पुरस्कार जित्नु वा नजित्नुले तपाईँको साहित्यिक यात्रामा के अर्थ राख्छ ?
एउटा सर्जकका लागि पुरस्कारको प्राप्ति भनेको उत्प्रेरणाको स्रोत हो तर साधना उसको कर्म, धर्म र आस्था सबै हो । पुरस्कार जित्नु र नजित्नुले सर्जकको कर्म, धर्म र आस्था कहिल्यै पनि डग्मगाउनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता रहिआएको छ ।
‘घामभन्दा पहिले’ मा सङ्ग्रहित नियात्राहरूमा के कस्ता विषयवस्तु र अनुभूतिहरू समेटिएका छन् ?
‘घामभन्दा पहिले’ नियात्रासङ्ग्रहमा हाम्रो देशका हिमाली भेगको उज्यालो भूगोल, संस्कृति, पर्यावरण र जनजीवनलाई समेट्ने प्रयास गरेकी छु । नियात्रा लेखनको माध्यमबाट देशप्रेम र आन्तरिक पर्यटनको भोक जगाउने प्रयत्न पनि हो मेरो ।
कथा र उपन्यासप्रति साहित्य बजारको झुकाव भएको अवस्थामा नियात्रा विधालाई, त्यो पनि पहिले पुस्तकको रुपमा किन प्रकाशन ल्याउनु भयो ?
म भ्रमणशील स्वभाव भएकी मानिस हुँ । भ्रमणमा निस्कनु भनेको कुनै नवीन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुनुजस्तै रोमाञ्चक क्षण लाग्दछ मलाई । किन किन भ्रमणले जति मीठो आनन्द अरू कुनै कुराले दिनै सक्दैन मलाई । त्यही आनन्दमय भ्रमणलाई अक्षरमा उतार्ने प्रयत्न गरेँ र प्रकाशनमा ल्याएँ । कथा र उपन्यास पढ्न म पनि रुचाउँछु । पढ्छु । तर यी स्वैरकल्पनामा आधारित हुने भएकाले यसको प्रभाव क्षणिक मात्र हुन्छ । तर नियात्रा चाहिँ शाश्वत साहित्य हो भन्ने लाग्छ मलाई । यसमा परिकल्पना होइन, पाइला पाइलामा मन र तथ्य मिसाएर लेखिने विधा भएकाले मैले यसलाई नै प्राथमिकतामा राखेँ । मैले बजारको माग हेरेर होइन, मनको रोजाइलाई प्राथमिकतामा राखेर लेखेँ र प्रकाशमा ल्याएँ ।
‘घामभन्दा पहिले’ ले पुरस्कार पायो भने त्यो आर्थिक राशिले के गर्नु हुन्छ ?
मेरो एउटा दृढ सङ्कल्प छ— साहित्य साधनाबाट प्राप्त पुरस्कारवापतको आर्थिक राशिलाई मैले कहिल्यै पनि नुन, भुटुनमा मिसाउने छैन । यसअघि पनि आर्थिक राशिसहितको पुरस्कार प्राप्त गरेका रकमहरू प्रतिभा निकुञ्ज नामक साहित्यिक संस्थामा साहित्यक्षेत्रमै खर्चिने गरी अर्पण गरेकी थिएँ । र, यस वर्ष म आफूले अध्ययन गरेको उदयपुरको आधारभूत विद्यालयमा अक्षयकोषमार्फत् जेहेन्दार विद्यार्थीका लागि एक “मेधावी प्रतिभा पुरस्कार” स्थापना गर्ने योजना बनाएकी छु । ‘घामभन्दा पहिले’ले पुरस्कार पायो भने त्यो आर्थिक राशि यही अक्षयकोष निर्माणमा प्रयोग गर्ने विचारमा छु ।
मेरो लक्ष्य आफ्नै देश देख्ने, टेक्ने र लेख्ने हो । म अहिले पनि खुम्बुक्षेत्रको यात्रामा छु । सगरमाथा आधारशिविर, कालापत्थर मात्र होइन; संसारभरिका पदयात्रीहरूले अत्यन्त महत्वपूर्ण गन्तव्यका रूपमा सम्मान गर्ने गरेका यही क्षेत्रका तीन पासहरू (खोङ्माला, चोला र रेञ्जोला) का चुलीहरू हुँदै नाम्चेबजारमा आइपुगेकी छु । मेरो काँधमा यी र यस्तै वैभवले भरिपूर्ण भूगोलको यात्रा गरेर अझै पनि लेख्नुपर्ने दायित्व छ भन्ने लागिरहन्छ ।
मेरो लेखनको माध्यम भने फरक हुन सक्ला तर विधागत रुपमा यसलाई नै अँगालिरहनेछु भन्नेमा छु । कहिले गद्यशैली त कहिले पद्यशैली पनि हुन सक्ला । तर मैले लेख्ने नियात्रा नै हो भन्ने लाग्छ ।
१० जेष्ठ २०७९ १९:०१
घामभन्दा पहिलेसाहित्यपोस्ट उत्तम कृति पुरस्कार